Kugara pamwe nemudiwa wako | Law & More B.V.
Kugara pamwe chete nemudiwa wako muNetherlands
''Law & More inobatsira uye kukutungamira iwe nemumwe wako nematanho ese ehurongwa hwekunyorera reti yekugara. ''
Iwe unoda kugara muNetherlands pamwe chete nemumwe wako? Muchiitiko ichocho iwe uchazoda mvumo yekugara. Kuti ukwanise kupihwa mvumo yekugara, iwe nemumwe wako muchafanira kuita zvakati wandei zvinodiwa. Pane akawanda akati wandei uye chaiwo madikanwa ari kushanda.
Chekutanga chikuru chinodiwa ndechekuti iwe nemumwe wako mese moda kuva nepasipoti inoshanda. Iwe zvakare unofanirwa kuzadza chiziviso cheantecentent. Mukuzivisa uku uchazivisa, pakati pezvimwe zvinhu, kuti hauna kuita mhosva dzakapfuura. Mune zvimwe zviitiko, iwe uchafanirwa kutora chikamu mukutsvaga kwehubhu mushure mekusvika muNetherlands. Izvi zvinoenderana nemamiriro ako uye nyika yako. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuve nemakore makumi maviri nemaviri kana kupfuura.
Zvimwe zvinoverengeka zvinodiwa
Chimwe chezvinhu zvinodiwa ndechekuti mumwe wako anofanirwa kuve nemari yakakwana inozvimiririra uye yenguva refu. Mari yacho inowanzo fanirwa kuenzana. Dzimwe nguva chikwereti chakasiyana chinoshanda, izvi zvinoenderana nemamiriro ako. Aya mamiriro haashande kana mumwe wako asvitsa zera reASI repension, kana mumwe wako asingagumi kushanda uye asina kukodzera kushanda kana mumwe wako asingakwanisi zvachose kuita chinodikanwa chekuita basa.
Chimwe chakakosha chakakosha chinotarisirwa neDutch Immigration- uye Naturalization Service, chiri kupfuura nekuongororwa kwevanhu vekunze. Chete kana iwe uchisunungurwa kubva mukuongorora iyi, haufanirwe kutora bvunzo. Iwe unoda kuziva kana iwe usingabvumirwe kutora bvunzo, kuti chii mitengo yacho kutora bvunzo uye sei iwe kusaina kunyorera bvunzo? Bata isu kuti uwane ruzivo.
Maitiro ekunyorera anoshanda sei?
Chekutanga pane zvese, zvinyorwa zvese zvinodiwa uye ruzivo ruchada kuunganidzwa, kunyoreswa zviri pamutemo uye kushandurwa (kana zvichidikanwa). Kana zvese zvinyorwa zvinodiwa zvave zvaunganidzwa, chikumbiro chemvumo yekugara chinogona kutumirwa.
Mumamiriro mazhinji, vhiza inodiwa inodiwa kuitira kuti ukwanise kuenda kuNetherlands uye ugogara kwemazuva anopfuura makumi mapfumbamwe. Iyi vhiza yakakosha inonzi Regular Providenceal Residence imvume (a mvv). Ichi chi sticker chinozoiswa mupasipoti yako neDutch Representation. Zvinoenderana nerudzi rwako kana uchida shuv.
Kana iwe uchida mvv, chikumbiro chemvumo yekugara uye mvv inogona kuendeswa mune imwe chete. Kana iwe usingade mvv, chikumbiro chemvumo yekugara chete chinogona kuendeswa.
Mushure mekutumira kunyorera, iyo Dutch Dhigiriji- uye Naturalization Service inoongorora kuti iwe nemumwe wako munosangana zvese zvinodiwa here kana kuti kwete. Sarudzo ichaitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe.
Une mibvunzo kana mhinduro pamusoro penyaya ino?
Ndapota inzwa wakasununguka kubata mr. Maxim Hodak, gweta ra Law & More kuburikidza maxim.hodak@lawandmore.nl kana mr. Tom Meevis, gweta pa Law & More kuburikidza tom.meevis@lawandmore.nl. Iwe unogona zvakare kutifonera panhamba inotevera yerunhare: + 31 (0) 40-3690680.
Next Iyo yekuDutch mari yekubiridzira uye yemagandanga mari yekudzivirira kudzivirira yakatsanangurwa »
pashure «Mhosva yevanogovana muNetherlands